Waa kuwee Shanta Kursi ee uu Farmaajo doonayo in laga fujiyo Axmed Madoobe? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Waa kuwee Shanta Kursi ee uu Farmaajo doonayo in laga fujiyo Axmed...
Waa kuwee Shanta Kursi ee uu Farmaajo doonayo in laga fujiyo Axmed Madoobe?
Kismaayo (Dalkaan.com) – Hogaamiyaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa dhowr Maalmood ku sugnaa Magaalada Kismaayo. Socdaalka Laftagareen ayaa ku qotomay Kuraas la rabo inuu Axmed Madoobe kasoo fujiyo kaasoo ay dhinaca Koofur Galbeed Kuraas ka jiraan.
Axmed Madoobe wuxuu rabaa inuu dhiso Saciid Cabdullaahi Deni, haddana wuxuu Kuraas taala Magaalada Kismaayo kala doodayaa Laftagareen oo dhisayo Farmaajo, waxayna caqlidayaan noqotay mid yaab leh.
1 – HOPP#126
Waxaa ku fadhiya Xildhibaan Maxamed Xasan Idirid oo loo yaqaano Maxamed Ganey, wuxuu kamid ahaa xubnihii sida weyn u mucaaradsanaa madaxweyne Farmaajo Afartii Sano ee lasoo dhaafay. Ninkaan iyo Xasan Firinbi waxay waqti dheer u taagnaayeen qadiyadda Jubbaland ee heer Federaal iyagoo la safnaa Axmed Madoobe.
Kursigaan wuxuu rabaa Laftagareen in la siiyo Nin la yiraahdo Xasan Eelaay oo dhowr jeer wasiir ka noqday Koonfur Galbeed. Beel ahaan labada Nin waa is leeyihiin, laakiin dooda waxay tahay muxuu Axmed Madoobe ka faa’idi doonaa codkaas oo lasoo ogyahay in shaqadiisa loo hayo madaxweyne Farmaajo.
Illo ka tirsan madaxtooyada Jubbaland oo aan la hadalnay waxay sheegeen inuu Axmed Madoobe fahamsan yahay qadiyada uu Laftagareen u raadinayo inuu bixiyo Maxamed Ganey. Kursigaan wuxuu ku jiraa Kuraasta lagu tijaabinayo Axmed Madoobe inuu xajisan doono siyaasiyiinta dhallinyarada ah ee la iibsan waayey Afartii Sano ee lasoo dhaafay.
2 – HOPP#130
Waxaa Afartii Sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Xildhibaan Maxamed Diiriye Khaliif oo ahaa wasiir ku xigeenkii Ganacsiga xukuumadii Xasan Cali Kheyre. Ninkaan ayaa horey shaqo joojin loogu sameeyey xilli ay soo baxeen arrimo la xiriira rag lagu qabtay Garoonka Aadan Cadde oo lagu eedeeyey inay dhaqayeen lacagta Dollarka ah.
Waxaa ku fadhisa Xildhibaan Luul Cabdi Aadan oo si aan qarsooneyn u taageereysay Labadii Sano ee muddo kororsiga aheyd ee uu Farmaajo sameystay, sidoo kalana si weyn u weerartay xildhibaanada mucaaradka oo qaarkood ay xatooyo ku eedeysay iyadoo saxaafadda la hadleysay.
4 – HOPP#124
Waxaa jira kursi kale oo madaxda maamul Goboleedyada Farmaajo taageersan si weyn ugu ololeenayaa oo ay Axmed Madoobe mar walba kala hadlaan waa kursiga HOPP#124, waxaa ku fadhiya Cabdiraxmaan Dheere oo Jubbaland iyo reerkiisaba ay si weyn u diidan yihiin.
5 – HOPP#91
Kursigaan hadda ma yaalo Magaalada Kismaayo, wuxuu yaalaa Garbahaarey, laakiin Laftagareen iyo madaxda maamulada qaar ayaa aamisan in Kuraasta taala Garbahaarey in ugu dambeyn loosoo wareejin doono Kismaayo.
Wararka Suuqa Kala iibsiga Maanta: Osimhen, Neves, Calvert-Lewin, Botman, Raphinha, Zaniolo
Ku soo dhawaada Wararka Suuqa kala iibsiga ee Ciyaaraha maanta oo aad maalin walbo kala socotaan Warbaahinta Ciyaaro.com Tottenham ayaa u dhaqaaqi doonta saxiixa weeraryahanka...
Tababaraha Tottenham Conte oo soo Dhaweeyay inuu Heshiiska u kordhiyo Kooxdiisa
Putin oo Erdogan u sheegay qodobada uu ku joojin karo dagaalka...
Deg deg RW Rooble oo Dil Loogu Hanjabay, Dhaarinta Xildhibaanada,...
Arsenal oo la kulantay Real Madrid si ay ugala hadlaan heshiiska...